Home Wararka Ururka Alshabaab oo sheegtay masuuliyada qaraxii ka dhacay Boosaaso
Ururka Alshabaab ayaa sheegtay masuuliyada qarax miino oo shalay galinkii dambe ka dhacay magaalada Boosaaso kaasoo lala eegtay goob ay ku sugnayeen saraakiil ciidanka amniga Puntland.
Ugu yaraan hal qof oo shacab ahaa ayaa ku geeriyooday weerarkaas, waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo uu ku jiro taliye ku xigeenkii hore booliiska gobolka Bari, Axamed Jaraale.
Weerarka ayaa ka dhacay maqaayad ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, wuxuuna ahaa miinada laga hago meelaha fog. Ammanka magaalada Boosaaso ayaa faraha kasii baxaya, iyadoo isla shalayna magaalada lagu dilay taliyihii hore ee kantaroolka magaalada Bosaso.
Previous articleSafiyo Abuukar Karaani oo caawa Muqdisho lagu dilay
Next articleSiyaasiyiinta beesha Xawaadle oo ka horyimid ciidanka la geeyay Baladweyne
Qoddobada Culus ee laga soo saaray Shirweynaha Beelaha Hawiye ee Muqdisho
Raisal Wasaare Khayre ayaa cisbitaalka Erdogan ku booqday dhawacyada qaraxii afgoye